]Onye nrụpụta kaadị egwuregwu bọọlụ omenala | HS Boardgame Printing
HS anọwo na-enye mbipụta egwuregwu bọọlụ na nkwakọ ngwaahịa ahaziri ahazi kemgbe 2002.
Ngwugwu egwuregwu bọọlụ
Edemede Akwụkwọ Foto
Nkwakọ ngwaahịa igbe
Nkwakọ ngwaahịa ọnya
]18 afọ ọkachamara nkwakọ na omenala osisi egwuregwu emeputa
Nhazi ahaziri maka ibipụta ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa, mepụta ngwugwu pụrụ iche na onyonyo ika gị wee kwalite ahịa ngwaahịa gị. Ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ HS boardgame nwere ihe karịrị 40 nwere ahụmahụ na-emepụta nkwakọ ngwaahịa, ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ ụlọ ọrụ, ahaziri maka mkpa gị, naanị maka ngwaahịa gị naanị maka nhazi nkeonwe, jụrụ ịdị ka, ngwaahịa rere na Japan, Germany, United States na ndị ọzọ. mba, a na-amata mmetụta imewe nke ọma.
Hongsheng, Dị ka otu n'ime ndị kasị mma omenala kaadị obibi na omenala osisi egwuregwu emeputa na China, tumadi pụrụ iche na osisi egwuregwu ebi akwụkwọ, foto akwụkwọ obibi akwụkwọ, atọ akụkụ atọ akwụkwọ, ihe ụmụaka egwuri egwu electronic, ihe enyemaka nkuzi, boutique agba igbe, na elu- igbe onyinye ngwụcha wdg, ọkachamara iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị iche iche e biri ebi.
OEM Tailor Mere Playing Card Game Custom Printing Family Board Game
]Kemgbe 2002, dị ka onye na-emepụta OEM/ODM kpọmkwem na onye na-ebupụ mbupụ na China, HongSheng Manufactory bụ ọkachamara n'ịmepụta egwuregwu bọọlụ, egwuregwu kaadị, kaadị egwuri egwu, akụrụngwa egwuregwu na igbe nkwakọ ngwaahịa.
Hongsheng Printing - Igbe dị elu ahaziri PET pụrụ iche igbe igbe ekwentị nwere nko rọba na-ejikọtaghị ọnụ.
]Ruo n'ókè dị ukwuu, ọdịdị nke igbe akwụkwọ, njirimara, ngwugwu, wdg nwere ike ịbụ ihe ndị dị mkpa na-adọta ndị ahịa. N'ime usoro mmepe nke mbipụta egwuregwu bọọlụ, mbipụta agba igbe, igbe akwụkwọ, akwụkwọ, ndị na-emepụta anyị na-agbaso usoro kachasị ọhụrụ na nyocha nke mmasị ndị ahịa, si otú a na-eme ka ebi akwụkwọ egwuregwu bọọlụ, mbipụta agba agba, igbe akwụkwọ, akwụkwọ pụrụ iche. na nhazi ya na ụdị nhazi ya. Banyere njirimara ya, anyị na-agbalị ime ka ọ pụta ìhè site n'inweta akụrụngwa dị elu.
Hongsheng Printing - igbe akwụkwọ ọnụahịa ụlọ ọrụ omenala dị elu igbe igbe ekwentị mkpanaaka nke na-emepụta akwụkwọ na-ebi akwụkwọ igbe igbe omenala.
]Omenala factory price akwụkwọ igbe High Quality ekwentị mkpanaaka case nkwakọ igbe emeputa akwụkwọ ebi akwụkwọ nkwakọ emewo merie elu anya na otuto si customers.Technology na-etinyere ka mma izute ahịa demand.It ga-n'ezie nabata ahịa' pụrụ iche temperament na uto.
Mbipụta Hongsheng - ihe egwuregwu egwuregwu ime ụlọ dị mma dị elu na kaadị CMYK obibi maka ụmụaka na-ere ọkụ.
]N'ụzọ bụ isi, ibi akwụkwọ egwuregwu bọọlụ, mbipụta igbe agba, igbe akwụkwọ, arụmọrụ akwụkwọ na ịdị mma ya bụ nke akụrụngwa ya na-ekpebi nke ukwuu. N'ihe gbasara akụrụngwa nke egwuregwu bọọdụ, ha agabigala ọtụtụ ule na akụrụngwa kemịkal na arụmọrụ ha. N'ụzọ dị otú a, a na-ekwe nkwa ịdị mma ngwaahịa site na isi iyi. Ka ọ dị ugbu a, a nwalere ngwaahịa a ka ọ mara mma yana ihe ndị ọzọ.
]Hongsheng Custom Board Game Card Mepụta Onye nrụpụta
Mepụta onyonyo akara pụrụ iche nke nkwakọ ngwaahịa gị, kwalite ike ahịa ngwaahịa.
Anyị nwere ihe karịrị 40 ahụmahụ nkwakọ imewe otu na ihe karịrị 10 afọ nke ụlọ ọrụ ahụmahụ. Anyị nwere ike hazie ngwaahịa anyị dịka mkpa anyị siri dị. Anyị na-eme ha naanị maka gị. Anyị na-ajụ ịbụ otu.
A na-ere ngwaahịa ndị ahụ nke ọma na Japan, Germany, US na mba ndị ọzọ, a matawokwa mmetụta imewe nke ọma.
Na-elekwasị anya na kaadị egwuregwu bọọlụ omenala na-ebi akwụkwọ na nkwakọ ngwaahịa maka afọ 19, ụlọ ọrụ ihe egwuregwu ụmụaka Japan ewepụtala onye mmekọ. Isi ụlọ ọrụ Dongguan nwere 8,500 square mita nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ike yana ihe karịrị ndị ọkachamara 300 na ndị ọrụ nka. Na Septemba 2017, ngalaba Huizhou, nke na-ekpuchi mpaghara karịrị square mita 20,000, etinyere n'ọchịchị. Enwetara ọtụtụ nkwanye ugwu dị ka "Onye na-ebubata ihe nke ọma nke Guangdong Province", "Asambodo Nleba Ndị Ahịa", "Eke asatọ Top Ten Boss Awards na Guangzhou District", "Eke nke asatọ Top iri onyeisi onyinye", na-ekwekọ na ISO9001 àgwà njikwa usoro asambodo ụlọ ọrụ.
HAMA na ụlọ ọrụ anyị abanyela nkwekọrịta nkwekọrịta ogologo oge
]HAMA na ụlọ ọrụ anyị abanyela nkwekọrịta nkwekọrịta ogologo oge
]Hongsheng na-enye gị ọkachamara kaadị egwuregwu egwuregwu kaadị obibi na ngwọta nkwakọ ngwaahịa!
Kemgbe e guzobere ya na 2001, ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ HS Boardgame dabere na ụkpụrụ nke "onye ahịa mbụ, àgwà mbụ; mma, ọganihu na-aga n'ihu." Dabere na ahịa, ọ meriri ntụkwasị obi na nkwado nke ndị ahịa si n'akụkụ niile nke ndụ. Guzosie ike a zuru okè àgwà usoro na 2009, gafere ISO9001: 2015 mba àgwà management usoro asambodo, gbasaa ya ọnụ ọgụgụ na 2010 na-ekpuchi ebe nke 8,500 square mita, meghere alaka na Huizhou na 2017, na-ekpuchi ebe 30,000. square mita, na ugbu a nwere banyere 600 ọrụ , E nwere 3 azụmahịa nkewa: osisi egwuregwu azụmahịa ngalaba, ụmụaka izi electronic egwuregwu ụmụaka ngalaba, boutique nkwakọ azụmahịa ngalaba.
Mbipụta azụmahịa akporo: osisi egwuregwu, foto akwụkwọ, atọ akụkụ, ụmụaka mmụta electronic ụmụaka, nkuzi ihe enyemaka, boutique agba igbe, elu-ọgwụgwụ onyinye igbe, ọkachamara na-enye ndị ahịa dị iche iche e biri ebi ngwaahịa. Production akụrụngwa: Heidelberg ígwè obibi akwụkwọ, mmanụ igwe, polishing igwe, laminating igwe, biya igwe, injection ịkpụzi igwe, SMT, waya bonding igwe, blister igwe, dijitalụ igwe, ọnwụ bed, mpịachi igwe, wdg Quality mmesi obi ike: na a zuru set. nke àgwà ule ngwá na a ọkachamara teknuzu otu iji hụ na àgwà nke ndị ahịa 'ebi akwụkwọ ngwaahịa.